Zodiac's Collection, Singapore (2021)
Luxury Fashion Goods Zodiac's collection မှတဆင့်လူကြီးမင်းတို့ ဝယ်ယူလိုသော luxury fashion goods များကို Singapore and UK မှတဆင့်ဝယ်ယူကာ မြန်မာပြည်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။
ပစ္စည်းများကိုမဝယ်ယူခင် အခမဲ့တိုင်ပင်မေးမြန်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Zodiac's Collection page လေးလည်း Feb 1 ရက်နေ့ကတည်းက နားထားတာ ယနေ့ဆို 84ရက်တိုင်တိုင်ရှိပြီးပေါ့။ ဒီကြားထဲမှာ လိုချင်တာ၊ လိုအပ်တာလေးတွေ လာမေးကျတဲ့ သူများကိုလည်း
မရောင်းပေးဖြစ်တာ အားနာရပါတယ်။ အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့‌နောက်မှ တို့တွေပျော်ပျော်ကြီး ဈေးဝယ်ပြန်ထွက်ကြတာပေါ့နော်
အကယ်၍ Centrum women 50+, Centrum men 50+ , Centrum Adults supplements တွေနဲ့၊ Estée Lauder skincare၊ Aveeno lotion ၊ suncream products တွေအထဲကလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်မှာ in stock တချို့ရှိ‌နေပါတယ်။ ငွေဈေးတွေအရမ်းတက်သွားပေမယ့် in stock itemsတွေကိုတော့ အားနာလို့ ဈေးအပြောင်းအလဲလုံးဝမလုပ်ထားပါဘူးရှင်
ဘယ်လောက်မိုးကြီးကြီး keep you dry ဖြစ်စေမယ့် Goretex ပါတဲ့ outdoor research ရဲ့မိုးကာအင်္ကျီတွေ
Promotion Price -145,500Ks (*ရန်ကုန်အရောက်ဈေး)
Original Price - 350,000Ks
Outdoor Research brand အိတ်လေးဈေးချပေးနေလို့...
အခုရန်ကုန်အရောက်ဈေးကို 38,000Ks ပဲရှိ‌ပါတော့တယ်
(*original price $159)
Chocolate 🍫🍫🍫🍫 ဆိုင်ရောက်နေပြီ မှာထားတာလေးတွေဝယ်ပေးဖို့။ ထပ်မှာချင်သူများရှိရင် မှာပေးနော်။ ဒီဆိုင်မှာ ၁နာရီလောက်ရှိပေးမယ်။ ဝယ်ပြီး ချက်ချင်း shipping agent လက်ထဲအပ်တော့မှာပါ
Edit - ပြန်ပါပြီရှင်🙂
ကြိုက်တဲ့ Chocolate အရသာကိုရွေး၊ ကြိုက်တဲ့ ဘူးခွံလှလှလေးထဲထည့်ပြီး လက်ဆောင်ပေးချင်သူများအတွက်🍫🍫🍫❤️❤️❤️
1 Chocolate + 1box ~ 10,000Ks (*ရန်ကုန်အရောက်ဈေး)
Tuesday flight✈️နဲ့ထည့်ပေးဖို့ အတွက် order ကို မနက်ဖြန် afternoon 12pm နောက်ဆုံးထားတင်ပေးကြပါနော်။ ဒါမှ 14Feb အမှီ ချစ်ရသူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးလို့ရမှာမို့လေ🙂
Melissa ဖိနပ်လှလှလေးတွေ တရုတ်နှစ်ကူးအကြို ဈေး‌တွေချနေပြီ 😍😍😍
Promotion price ~ 65,000Ks (U.P ~160,000Ks)
Due to high demand, Centrum Silver Multivitamin for women 50+ လေး stock ပြတ်သွားပါပြီရှင့်။ ဝယ်ယူကြသူများကို လည်း Zodiac's Collection team မှကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်💜
Centrum Multivitamin for Men 50+
Centrum Multivitamin for Adults (*အသက် 50အောက်) အတွက်ကတော့ ရန်ကုန်မှာ in stock နည်းနည်းကျန်ပါသေးတယ်နော်
အခုအသစ်ထပ်မှာ‌မယ့် Centrum Silver Multivitamin for women 50+ က (200 tablets)ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး၊ ရောင်းဈေးက တစ်ဗူးကို 35,000Ks ပါရှင့်
Haveafabulous weekend everyone 💜💜💜
Uniqlo Kids T-shirts (*age from 4-11 years)
Price - 19,000Ks
Uniqlo Women Flannels
Price - 21,500Ks
Uniqlo Male Flannels
မင်မင်ကိုယ်တိုင်သုံးနေတဲ့ LuLuLun face mask
ဈေးချမှရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားတာ အခု chinese new year ဈေးချတာတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါပြီရှင့်
mask sheet ၇ခု ပါဝင်တဲ့တစ်ထုတ်ချင်းစီရဲ့ဈေးကအခု 9,000Ks ပဲရှိပါတော့တယ်။ အနီလေး နဲ့ အပြာလေးက မင်မင်ရဲ့ favourite 🥰
Adidas ကျောပိုးအိတ် စျေးချနေတဲ့ items တွေပါ။
၃၆,၀၀၀ကျပ်ပါ ။ ခုမှာလို့ရပါတယ် ဆိုင်ရောက်နေလို့ပါ။
Sheshido skincare ရဲ့ group အောက်က ဂျပန်မှာ No. 1 Drugstore Cleanser တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Senka Perfect Whip
🎌made in Japan
CROCS shoes sale is back
ယောက်င်္ကျားစီး၊ မိန်းမစီး၊ ကလေးစီး အကုန်ပါတယ်နော်
ကြိုက်တာယူ တရံ - 37,000Ks✔️ (မြန်မာပြည်အရောက်ဈေး)
⚠️ မှတ်ချက်- ၂ရံ အနည်းဆုံးဝယ်ယူရမှာပါရှင်
⚠️ Sale ရှိတုန်းပဲရောင်းပေးနိုင်တဲ့ဈေးပါနော်။ဆိုဒ်‌တွေကလည်း အရမ်းနည်းနေပါပြီနော်
Topshop ကဈေးလျှော့ထားတဲ့ dress လေးတွေ👗👗👗
Promotion price ~ 33,000Ks
American brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ "Earthwell"
Earthwell က ထုတ်တဲ့ products တွေအများကြီးထဲကမှ မင်မင်ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးစွဲနေတဲ့ နေ့စဉ်သုံး ဗူးလေးတစ်ခုကို စတင်မိတ်ဆက်ဝယ်ယူရောင်းချပေးမယ်နော်😊
ဒီ‌ဗူးလေးက ရေအပူကိုထည့်ထားရင် ၈နာရီကြာအောင် ပူနေပြီး၊ ရေခဲရေကိုထည့်ထားရင် ၁ဝနာရီကြာ‌အေးနေပါတယ်။ရေခဲအတုံးသာထည့်ထားရင်တော့ နာရီ၃၀ ကြာတောင်အေးနေပါတယ်ရှင်
အဲ့တော့ ယူတို့လည်း အလုပ်ကို coffee လေးထည့်သွားချင်တာတို့၊ အပြင်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ပျော်ပွဲစားထွက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊နောက်ဆုံး camping 🏕️ထွက်မလား၊ hiking သွားမလားကွာ
အချိုရည်လေးတို့၊ဘီယာလေးတို့ကို အေးအေးလေးသောက်ချင်လို့ ထည့်သွားချင်သူ‌တွေအတွက် အရမ်းကိုအသုံးတည့်တဲ့ ဗူးလေးပါနော်
နောက်ထပ် သူ့ရဲ့အားသားချက်က 1-year အာမခံပါဝင်နေတာပါ။
ရေဗူးလေးကို ဝယ်ယူသူတိုင်းစီကို စင်္ကာပူကနေ မပို့ပေးခင်လည်း ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးမှ ပို့ပေးမှာဖြစ်လို့ ဘာမှမပူရဘူးနော်😊
🍃 Simple က မျက်နှာသစ်ဆေးတွေ ကြိုက်တာယူကွာ
တစ်ဗူး 12,000Ks (150ml)
⚠️စင်္ကာပူမှာ stocks ရှိသလောက်ပဲရမှာနော်⚠️
Origins က ဈေးချပေးနေတဲ့ skincare sets လေးတွေပါ၊ ဒါ့အပြင် Origins ကဝယ်ယူသူတိုင်းကိုလည်း travel sizes လက်ဆောင်လေးတွေထပ်ထည့်ပေးနေပါသေးတယ်
Clinique ချစ်သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းပါ
‌ဒေါ်လာ400 ကျော် တန်ဖိုးရှိပြီး၊ အကုန် full size တွေပါဝင်တဲ့ အောက်ကပြပေးထားတဲ့ဒီ set တစ်ခုလုံးကို ၅ရက်တာ ဈေးချနေလို့ပါ။ Clinique skincare သုံးစွဲသူတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို highly recommended ပါရှင်
ယခုဈေးက ရန်ကုန်အရောက်ကို 135,000Ks ပဲရှိပါတော့တယ်
ဘာproductsတွေပါတယ်၊ဘယ်လိုsize တွေပါတယ်ဆိုတာ ‌ပုံလေးတွေမှာကြည့်လိုက်နော်😊
အက်မင်တို့ ရောင်းသောပစ္စည်းများသည် ဝယ်သူအိမ်အရောက်စျေးများမဟုတ်ပါရှင့် ။ ဝယ်ယူသူမှ မြို့တွင်း၊ နယ်ဝေးပစ္စည်းပ်ို့ဆောင်ခအား ပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့် ။ အိမ်မှာ လာယူလို့လည်းရပါတယ်ရှင့်။အွန်လိုင်းရောင်းတာ ဖြစ်လို့ ပစ္စည်းပို့ခအား ဝယ်ယူသူမှ ပေးချေရမှာဖြစ်ကြောင်း နားလည်မည်ဟု ယူဆသောကြောင့် ကာစတမ်မာ တစ်ယောက်ချငိးစီအား မရှင်းပြမိသော အက်မင်တို့၏ လိုအပ်ချက်လည်းပါ ပါသည်။ အဆင်ပြေကြပါစေရှင့် ။
You can’t buy happiness, but you can buy chocolate တဲ့နော် 😋
You can't buy happiness,but you can buy Chocolate 🍫
ချစ်တို့ရေ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဝယ်ယူလို့မရပေမယ့် chocolate 🍫တော့ဝယ်စားလို့ရတယ်နော် ဟီး😁
အားလုံးအတွက် 🔸🔶 Neutrogena 🔶🔸
စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး drugstore တစ်ခုကနေ ဝယ်ယူရောင်းချပေးမှာဖြစ်လို့ ပစ္စည်းချင်းတူရင်တောင် quality ပိုင်းက ပိုစိတ်ချရတယ်ဆိုတာအာမခံပါတယ်နော်
Neutrogena က ချစ်တို့လိုချင်တဲ့ product ကိုသာပြောလိုက်ပါ🙂
Import from SG 🇸🇬ဆိုတာ ထပ်ပြောတယ်နော်
For Men ♂️
Roll-on ချွေးနံ့ပျောက်အတောင့် 🙂
Bershka က oversized cropped top လေးနဲ့ မင်မင်လှလား😜
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ဝတ်လို့ကောင်းတယ်။ ကြိုးတော့ အရမ်းမဆွဲရဲဘူး မင်မင်ရဲ့ ဗိုက်က 6packs တွေမြင်ကုန်မှာဆိုးလို့ 😬
ကြိုက်လို့ မှာချင်ရင်တော့ ဒီညပြောထားပေးကြ မနက်ဖြန်ဆိုင်သွားကြည့်ပေးမယ်။ ဘာဆိုဒ်တွေရအုန်းမယ်ဆိုတာတော့ သေချာမသိလို့လေ။ ဈေးက 22,000Ks ပဲ
Zodiac's Collection ရဲ့ best seller products တွေထဲကတစ်ခု
Stocks တွေဝယ်မရလို့ order တွေဆက်လက်မခံဖြစ်ခဲ့ဘူး😑
မေးထားတဲ့သူတွေကို နာမည်လေးတွေမှတ်ထားပေးပါတယ်နော် stocks တွေထပ်ရောက်ရင် ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ရှင့်🤟🤟
🌾🌾The power of oats🌾🌾
နောက်တပတ် စနေနေ့ဆို ရန်ကုန်မှာ Mustela လေးတွေရောက်ပါပြီ၊ အကြာကြီးစောင့်စရာမလိုတော့ပါဘူးနော်🙂 ဝယ်ယူချင်သေးသူများ CB လိုက်ပါရှင့်
🥑Mustela hydra bébé facial cream (40ml)~17,000Ks
🥑Mustela hydra bébé body lotion(300ml)~25,000Ks
🥑Mustela gentle cleaning gel (500ml) ~25,000Ks
(Hair and Body)
ချစ်တို့ရေ 👇ဒါလေး 7ဗူး ရမယ်ရှင့်။
ဈေးကတစ်ဗူး- 37,000Ks (354ml)
CB နော် first come, first served ပါရှင့်
အရေးအကြောင်းဖြစ်လာတာ‌တွေကိုလျော့ချပေးတယ်၊ ချွေးပေါက်လေးတွေကိုကျဉ်းပေးတယ်၊ အသားအရေခြောက်သွေ့မှုကိုကာကွယ်ပေးပြီး မျက်နှာကိုကြည်လင်ဝင်းပစေမယ် အားလုံးသိကြပြီးသား luxury skin care product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Elizabeth Arden ရဲ့
30-capsules တစ်ဗူး- 59,900Ks
ဈေးနှုန်း‌လေးကအရမ်းတန်နေပါပြီ🙂 တချို့ ဒီလို authentic product ကိုတစ်လုံးချင်းစီ 2,500Ks နဲ့ခွဲရောင်းနေတာပါနော်
Eyeshadow လေးကိုဈေးကြီးကြီးပေးမသုံးချင်သူတွေအတွက် Sephora က n**e edition and gold edition
Selling price ~ 25,500Ks
Zodiac's Collection ကိုချစ်ကြလို့ post လေးကို share ပေးကြ၊ ဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့သူများကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်💗
မနေ့က မထင်မှတ်လောက်အောင် lotion လေးတွေမှာယူသူအရမ်းများသွားတော့ promotion မပြီးသေးပေမယ့်၊ order လက်ခံတာ ခဏလေးရပ်ပါမယ်လို့ ပြောပါရစေရှင့်။ မနေ့ညက မင်မင်တို့လည်း တတ်နိုင်သလောက်orderလက်ခံပေးတာ မနက် ၂နာရီထိုးသွားတယ်😬 လိုအပ်သလောက် stock တွေဝယ်မရမှာဆိုးလို့ပါရှင့်။
အများကြီးဝယ်ယူလို့ရခဲ့ပြီးရင် in-stock အဖြစ်ပြန်တင်ပေးမယ်နော်
အားလုံးကိုချစ်တဲ့ Zodiac's Collection team 🤟 မွချိ 😘😘
Happy Sunday Morning ပါချစ်တို့ရေ🍀🍀🍀
နံနက်စာ အတွက် စဉ်းစားမရဖြစ်နေတာမျိုးတို့၊ အလုပ်မရှုပ်ချင်တာမျိုးတို့ အချိန်မရလို့ ဆိုတဲ့ ချစ်တို့အတွက် မင်မင်စားသလို Marks & Spencer က cereal လေးနဲ့ နွားနို့လေးကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးစားသုံးချင်လို့ မှာချင်တယ်ဆို CB လိုက်နော်။
🌾🌾The power of oats 🌾🌾
Aveeno ရဲ့ဈေးလေးတွေပါ။ဘာယူယူ တစ်ဗူးကို 19,500Ks ပါရှင့်
Promotion end by 13-Jan နော်
မင်မင်ကိုယ်တိုင်ကတော့ body lotion ဆို fragrance free ကိုကြိုက်တော့လေဒီ Aveeno လေးသုံးဖြစ်နေတာ နှစ်အတော်ကြာ‌ပါပြီ။ဒီ moisturizing အရမ်းပေးတဲ့ body lotion လေးကတော့ သဘာဝ oatmeal🌾🌾 ကိုအဓိကသုံးပြီးလုပ်ထားတာပါ။
အခု Aveeno လေးက 13-Jan အထိ 30% ဈေးချနေလို့ ချစ်တို့ဝယ်ချင်ရင် တန်နေလို့ လာပြောပေးတာပါ။ ဒီတမျိုးထဲမဟုတ်ဘူးနော် stress relief တို့၊ skin relief တို့လည်းရှိသေးတယ်။ ပုံလေးတွေနဲ့အတူ ခဏနေဈေးလာတင်ပေးမယ်နော်🙂
အိမ်မှာတော့ oat plant မရှိတော့၊ ရှိတဲ့ပူစီနံအပင်နားပဲကပ်ရိုက်လိုက်တယ်ကွာ😁
Be the first to know and let us send you an email when Zodiac's Collection posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Sendamessage to Zodiac's Collection:
Estée Lauder Limited Edition Set Unboxing
石艺园。Stone Art Park
Honey Choo Singapore online shopping
1 Coleman Street, #04-28 The Adelphi
1 Coleman Street #03-57 The Adelphi
1 Coleman Street #01-02 The Adelphi
1 Coleman Street 02-30/31 The Adelphi Singapore
Audio Atelier Singapore
1 Coleman Street, #04-49/50 The Adelphi
1 Coleman Street #04-35 The Adelphi
Other Retail Companies in Singapore
3014 Bedok Industrial Park E #02-2158
York Boutique - Plus Size Fashion Store
810 Geylang Road, #03-84
Union Book Co Pte Ltd 友联书局
Blk 231 Bain Street #03-01 Bras Basah Complex
Thye Hin Hoe Medical Store 泰興和蔘茸藥行
Block 208 New Upper Changi Road #01-683 （Bedok Central）
21, Woodlands Close, Primz Bizhub, #04-40
1003 #01-39 Eunos Avenue 8
#02-10/11 Sim Lim Tower 10 Jalan Besar
Sin Spring City Trading
245 Jalan Ahmad Ibrahim
Baby Products Marketplace Singapore
1 Scotts Road - NO SHOWROOM